गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणलाई नियाल्दा कुन बैंक कति बलियो ? - Laganikhabar
बुधबार, ०६ असोज २०७८| Wednesday, September 22, 2021
गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणलाई नियाल्दा कुन बैंक कति बलियो ?
सोमबार, ०७ भदौ २०७८, १२ : २८ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौं - नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचिकृत अघिकांश कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौंथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केहि कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन् बाँकी रहे पनि अधिकांश कम्पनीहरुले समयमै आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसमध्ये आज हामी वाणिज्य बैंक समूहको चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
नेपालमा 'क' वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । २७ बैंकमध्ये २६ वटा बैंकहरु नेप्सेमा सूचिकृत छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक अन्य २६ बैंक नेप्सेमा सूचिकृत रहेको छ । ती सबै बैंकहरुले अहिले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
लगानीको लागि अन्य क्षेत्रभन्दा सुरक्षित मानिने वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमाससम्म कस्तो वित्तीय प्रगति गरेका छन् । कुन बैंकले कुन समूहमा प्रगति हासिल गरेका छन् । आज हामी सो सम्बन्धि चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
कुनैपनि कम्पनीले आफ्नो वितरणयोग्य मुनाफाको आधारमा आफ्ना लगानिकर्तालाई प्रतिफल दिने गर्छ । त्यसैले कुनैपनि कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफाबाट नै लगानीकर्ताले कुन कम्पनीले कति लाभांश वितरण गर्न सक्ने भन्नेबारे आंकलन गर्न सक्छन् ।
यसरी गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा सार्वजनिक वित्तीय विवरणलाई हेर्ने हो भने मुनाफा गर्न सबैभन्दा बलियो नबिल बैंक लिमिटेड रहेको छ । नबिल बैंक मुनाफा वितरण गर्नमा सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । समिक्षा अवधीसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, सो अवधिसम्म सबैभन्दा कम वितरण योग्य मुनाफा नेपाल एसबिआई बैंकको देखिन्छ । एसबिआई बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा गत आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्ममा ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा सीमित देखिन्छ ।
यद्यपी समग्रमा २७ वटै वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरणलाई नियाल्ने हो भने सबैभन्दा बढी वितरण योग्य मुनाफा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । यो नेप्सेमा सूचिकृत नभएकोले यसले प्रतिफल भने दिंदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ४ अर्ब ४२ करोडभन्दा धेरै रहेको छ ।
यता, सबैभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने बैंकमा पनि नबिल बैंक लिमिटेडले नै अग्रस्थान ओगटेको छ । कम्पनीले गत वर्षको चौंथो त्रैमाससम्म ४ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रोमा क्रमश: ग्लोबल आईएमई बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रहेका छन् । सो अवधिसम्म सबैभन्दा कम खुद नाफा आर्जन गर्नेमा सिभिल बैंक लिमिटेड रहेको छ । असार मसान्तसम्म बैंकले ५६ करोड मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
चुक्ता पूँजीको आधारमा वाणिज्य बैंकहरुलाई तुलना गर्ने हो भने ग्लोबल आईएमई बैंकले अग्रस्थान ओगटेको छ । असार मसान्तसम्म बैंकको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, एनएमबि बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ३२ करोड र तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब २५ करोड रहेको छ । सबैभन्दा कम चुक्ता पूँजी भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
जगेडा कोषको आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेड अगाडी रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संचित छ । जगेडा कोषमा सबैभन्दाकमजोर सेन्चुरी कमर्शियल बैंक रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र संचित रहेको छ ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा धेरै खुद व्याज आम्दानी एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले गरेको छ । सो अवधिसम्म ९ अर्ब २२ करोड खुद व्याज आम्दानी आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
प्रतिसेयर आम्दानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले अग्रस्थान ओगटेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३७ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ । त्यसैगरी नबिल बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ३२ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ । त्यसैगरी, सिभिल बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी सबैभन्दा कम ६ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ ।
यसरी हेर्दा गत आर्थिक वर्षको चौथौ त्रैमाससम्मको वित्तिय विवरणका आधारमा वाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफाको अवस्था यस्तो छः
दशैंलाई आजबाट नयाँ नोट साट्न पाइने
११ अर्ब ८३ करोडको ट्रेजरी बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक, बाेलकबाेल कहिले ?
सरकारबाट विभुषित भइन् मेगा बैंककी डेपुटी सिइओ रविना देशराज श्रेष्ठ
कामना सेवा बैंकद्धारा एनआरएन बचत खाता सञ्चालनमा
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ग्लोबल आइएमई बैंक र निड्सबीच सम्झौता
बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानामाथि लागेको आरोप सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिले बुझायो प्रतिवेदन
मंगलबार थप १३३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेप्से परिसूचकमा दाेहाेराे अंककाे वृद्धि, ९ वटा उपसमूहकाे सूचक बढ्याे
इक्राले गर्याे रू रू जलविद्युतको रेटिङमा स्तरवृद्धि
मैलुङ खोलाको आईपीओ नेप्सेमा सूचिकृत, ओपनिङ्ग रेञ्ज कति ?
सिभिल बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने
नेप्सेमा थपियो २९ हजार कित्ता बोनस सेयर
नेप्से परिसूचक ११४ अंकले घट्यो, कहिले रोकिन्छ ओरालो यात्रा ?
अरुण भ्यालीसहित यी १० कम्पनीको भयो सर्वाधिक करोबार
राताम्मै भएको बजारमा यी १० कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाए
नेप्से अपडेट : तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे लाभांश घोषणा
तेह्रथुम पावरको आईपीओ पाउन भाग्यकै भर
साहस उर्जाकाे आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
यी ५ कम्पनीको हकप्रद सेयर आउँदै, कुनको कित्ता कति ?
तेह्रथुम पावरको आईपीओमा अन्तिम दिनसम्म कति पर्यो आवेदन ?
तेह्रथुम पावरको आईपीओमा आवेदनको वर्षात, कतिले भरे ?
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा बीमासहितको निक्षेप सुविधाअन्तर्गत २० लाख बीमा रकम भुक्तानी
नेप्सेमा ६० लाख कित्ता सेयर सूचिकृत